Shina Italia-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Serivisy serivisy>Ranomasina Mediterane sy Ranomasina Mainty>Shina mankany Italia
Fandefasana entana avy any Shina mankany Italia
Raha mitady mpandeha lavitra azo itokisana ianao hanampy ny fandefasana anao avy any Chine ka hatrany Italia, dia amin'ny toerana mety ianao.
Na ny serivisy fandefasana entana avy any Chine mankany Italia aza dia tena matotra ankehitriny, ny SHL dia afaka manandrana hatrany amin'ny fanaovan-tsonia ny tsaratsara kokoa, ankoatra ny vahaolana tsara sy ny serivisy tsara, afaka manome salan'isa mifaninana ihany koa isika avy any Chine ka hatrany Italia.
Ny SHL dia hanampy anao hisafidy ny làlana fandefasana tsara indrindra, vidin'ny fandefasana fifaninanana sy ny orinasa fandefasana tsara indrindra hanampy ny fanafarana anao avy any Chine ka hatrany Italia.
Fitaterana làlana eropeanina any China ka hatrany Italia
Fantsona lojika faha-efatra eo anelanelan'i Sina sy Eropa taorian'ny fitaterana ny rivotra, ny ranomasina ary ny lalamby. Izy io dia miampita amin'ny kaontinanta Eurasianina amin'ny alàlan'ny seranan-tsambon'i horgos any Sina, mandalo an'i kazakhstan, Russia, Belarus ary Polonina ka hatrany Italia, afovoan'i Eropa.
China Railway Express avy any Chine ka hatrany Italia
Ny SHL dia manome serivisy lalamby maharitra eo anelanelan'i Chine sy Italia ho an'ny entana entana entana ho an'ny FCL sy LCL, lozisialy tetikasa Belt ary One Road ho an'ny vahaolana fanondranana entana sy fanondranana ary afaka mamaha ny olana momba ny famafana ny fomba amam-panao any Sina isika.
Fandefasana entana an'habakabaka avy any Chine ka hatrany Italia
Betsaka ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena mahazatra any Italia ary misy ihany koa ny entana fandefasana entana avy any Chine ka hatrany Italia amin'ny alàlan'ny rivotra, ny SHL dia afaka manome fantsom-pifandraisana mahomby izay ambany noho ny tsena amin'ny mpanjifantsika mifototra amin'ny fandaharam-pivarotanao.
Fandefasana entana Ro-Ro / Break entana avy any Chine ka hatrany Italia
SHL dia afaka manome RORO ROROMAFI BREAKBULK ho an'ny fitaovana famepetra, fiara ary fitaovana mavesatra avy any Chine ka hatrany Italia Afaka manome vahaolana fiatoana sy fanandramana.
Fandefasana entana an-dranomasina avy any Chine ka hatrany Italia
Ny SHL dia manana kojakoja tsara amin'ny fandefasana entana avy any Chine ka hatrany Felixstowe, Southampton, sns. Mba hahafahantsika mahazo hatrany ny seranan-tsambo tsara mankany Italia amin'ny seranan-tsambo maro ， ary ahafahantsika miantoka ny toerana famatsiana na dia amin'ny vanim-potoana faran'andro aza.
Door to Door service Shina mankany Italia
Ho an'ny serivisy varavarana isan-trano dia afaka manao clearance fanao haingana any Italia ny SHL ary manatitra tsara ny fandefasana ny entana any amin'ny tranon'ny mpanjifantsika, ankoatra izany, raha toa ianao dia manokana, SHL dia manana orinasa ara-barotra izay mety ho consignee amin'ny BL ary hanampy anao hanafatra ny fandefasana. entana mahomby.
Sahabo ho 7,775 XNUMX km miala an'i Italia i Shina saingy mety haharitra ela kokoa noho ny làlan-dranomasina voafaritry ny vatan-dranomasina ny zotra amin'ny halaviran-dalana.
Alohan'ny hisafidianana io fomba fandefasana io dia tsy maintsy mahafantatra tsara ny seranana samihafa any Sina sy Italia izy.
Seranam-piaramanidina lehibe any Italia
diamondra Seranam-piaramanidina Ancona
Seranam-piaramanidina Costa Smeralda Seranam-piaramanidina Punta Raisi
Seranam-piaramanidina Florence Seranam-piaramanidina Aeroporto Vincenzo Florio
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Linate Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Pescara
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Pisa Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Naples
Seranam-piaramanidina Rome Fiumicino Seranam-piaramanidina Catania-Fontanarossa
Milan Seranam-piaramanidina Reggio Calabria
Seranam-piaramanidina Bari Karol Wojtyła Aeroporto di Verona Airport
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Orio al Serio Seranam-piaramanidina Milan Malpensa
Seranam-piaramanidina Alghero-Fertilia Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Lamezia Terme
Brindisi - Seranam-piaramanidina Salento Seranam-piaramanidina Bologna Guglielmo Marconi
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Federico Fellini Seranam-piaramanidina Venco Marco Polo
Seranam-piaramanidina Genoa Cristoforo Colombo Seranam-piaramanidina Aeroporto Friuli Venezia Giulia
Modely fandefasana entana avy any Chine ka hatrany Italia
Isaky ny manafatra entana avy any Shina ka hatrany Italia ianao dia afaka misafidy maody fandefasana maro.
Seranan-tsambo inona no tokony hampiasaiko handefasana avy any Chine mankany Italia?
Satria mila seranana afaka mampifandray anao mivantana any italiana ianao
Isaky ny inona ny fotoana raisina an-tsambo avy any Sina mankany Italia?
Raha fintinina dia afaka azonao atrehina amin'ireto rehetra ireto ianao mba hahazoana ny fotoana mety hahitana azy rehefa avy any Chine ka hatrany Italia
Ireo mpandeha ho an'ny fifamoivoizana toy izany dia mahalala ny fitsipi-pitondrana sy fitsipika mifehy ny fanafarana avy any Shina mankany Italia